कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा असाध्यै मर्कामा परेको क्षेत्र हो, विश्व खेलकुद । नेपाली खेलकुद पनि त ठूलो समस्याबीच गुज्रिन बाध्य रह्यो । एकपछि अर्को प्रतियोगिता सरेका छन्, केही हुन नसकेका छन् । घोषणा भएका प्रतियोगिता पनि अब रद्द भएर कहिले हुने हो, त्यसको टुंगो छैन । तर, यसैबीच पनि नेपाली खेलकुद धेरै हदसम्म भाग्यमानी रह्यो र यसले खुसीको समाचार सुन्ने अवसर पायो । अनि यो यस्तो समाचार हो, जसले नेपाली खेलकुदमा पछाडिसम्म पनि सुखद असर हुनेछ ।
सबैभन्दा अगाडि पृष्ठभूमि नै । पाँच महिना जत्तिकै समय भयो, नेपालमै भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सकिएको । त्यो नेपालको खेलकुद इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा सफल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता रह्यो र यसको कारण हो, नेपालले चिताएको भन्दा पनि बढी पदक जित्नु । नेपालले जितेका पदक र त्यस सफलतालाई आत्मसात् गरेका खेलाडीबारे त धेरै लेखिए, उत्तिकै विवेचना पनि भइसकेको छ । मंसिर १५ देखि २४ सम्म आयोजित प्रतियोगितामा नेपालले ५१ स्वर्ण जितेको थियो ।
अनि नेपालले जितेको रजतको संख्या ६० थियो भने काँस्य ९६ । तर, लेखिन बाँकी थियो त, एउटा अन्तिम पाटो । र, त्यो पाटो थियो, खेलाडीले सरकारद्वारा घोषित नगद पुरस्कार पाउनुपर्ने । यही पुरस्कार कोरोना भाइरस कहरका कारण चलिरहेको लकडाउनबीच खेलाडीले पाए । एक प्रकारले खेलाडी यो नगद पुरस्कार पाउने छौं भनेर आश पनि मारिसकेका थिए, किनभने सरकारले पुरस्कार दिनेछौं भनेर पनि दिएको थिएन, दिने टुंगो पनि थिएन् ।
साग सकिएको भोलिपल्ट नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुरस्कार रकमको घोषणा गरेका थिए । यस्तोमा धेरैले निराशा भएर प्रश्न पनि गर्न थालेका थिए, पुरस्कार कहिले दिन्छौं त ? हाम्रो पसिनाको फल कहिले प्राप्त हुनेछ त ? अब भने खेलाडीले यही नगद पुरस्कार हात पारेका छन् र तिनका बैंक खातामा सोझै जम्मा पनि भइसकेका छन् । यस्तोमा खेलाडीले कोरोना भाइरस संक्रमणले निम्तयाएको पीडाबीच अपार खुसी आत्मसात गरेका हुन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अनुसार यसरी नगद पुरस्कार पाउने खेलाडीको कुल संख्या थियो ४ सय ३५ जना ।
अनि यी खेलाडीले पाउने कुल रकम थियो, १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ । अब तय छ, विजेता खेलाडीले आफ्ना केही न केही सपना पूरा गर्न सक्नेछन् । खेलाडीले कति–कति पाए त ? यसको पनि सूची तयार पारौं न । एकल खेलतर्फ स्वर्ण विजेताले ९ लाख, रजत विजेताले ६ लाख र काँस्य विजेताले ३ लाख रुपैयाँ पाएको थियो । सामूहिक खेलतर्फ भने स्वर्णलाई ६ लाख, रजतलाई ४ लाख र काँस्यलाई २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
यसअनुसार सबैभन्दा बढी नगद पुरस्कार पाउने भाग्यमानी नेपाली खेलाडी रहे, पौडीकी गौरिका सिंह । उनले ६६ लाख रुपैयाँ पाइन् । उनले ४ स्वर्ण, २ रजत र ३ काँस्य जितेकी थिइन् । अहिले उनी लन्डनमा आफ्नो परिवारसँगै छिन् र नेपाली मिडियासँगको कुराकानीमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सतर्क रहन अनुरोध गरिरहेकी छिन् । उनको यो अनुरोध किन पनि अर्थ राख्छ भने उनका चिकित्सक बुबा आफैं कोरोना भाइरसको संक्रमणमा परेका थिए ।
दोहोरो स्वर्ण जित्ने तीन खेलाडी रहे, तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य, कराँतेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ र गल्फका सुभाष तामाङ । तीनै जनाले २२/२२ लाख रुपैयाँ पाए । धेरैभन्दा धेरै खेलाडी लकडाउनका कारण घरमै सीमित हुनु परेकाले तिनले योजना बुन्न पनि पाएका छैनन् । त्यसमै एक पर्छन्, मण्डेकाजी पनि । उनी आफ्नो खातामा २२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको दंग त छन् नै । यसमध्ये केही भाग उनी कोरोना भाइरस पीडितका लागि खर्च गर्ने पक्षमा पनि छन् ।
अझ उनी माक्स उत्पादन गरेर त्यसलाई बाँड्ने अभियानमा पनि छन् । उनी भन्छन्, ‘सामाजिक काममा मेरो पहिलेदेखि नै रुचि हो, म यो कायमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु । पाएको पुरस्कारको केही अंक पक्कै पनि यही काममा लगाउनेछु । त्यस बाहेकको रकम परिवारको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्ने योजना बनाउने पक्षमा छु । अहिले नै यही गर्छु भनेर निर्णय गरेको छैन, तर सम्भवत: व्यापारमा लगानी गर्न चाहन्छु ।’
खुसी त आयषा पनि छिन् र उनका श्रीमान् दीपक विष्ट पनि । दुवैले लकडाउनमा आफूहरूले कसरी दिन बिताइरहेका छौं भनेर तस्बिर र सन्देश प्रभाव गरिरहेका छन् । शारीरिक रूपमा फिट हुने प्रायसमा छन् । उनीहरू पनि पुरस्कार राशि पाएको खुसी व्यक्त गरेका छन् । आयषा भन्छिन्, ‘हामी पनि चाहन्छौं, यो पुरस्कार राशिको केही अंश कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गर्ने । बाँकी रकम भने घर बनाउँदा लिएको ऋण तिर्नेमा खर्च गर्नेछौं ।’
भएको के रहेछभन्दा केही भयो, दीपक र आयषाले शंखमूलतिर घर बनाएको थियो । त्यसका लागि उनीहरूले ऋण लिएका थिए, प्रत्येक महिनामा त्यसको किस्ता तिर्ने तनाव हुन्थ्यो । अब त्यही पुरस्कार राशिबाट प्राप्त रकम त्यही ऋण तिरेर चुक्ता गर्ने आयषाको योजना छ । सञ्जीवकुमार ओझा पनि तेक्वान्दोका खेलाडी हुन् । यी आर्मीका खेलाडी अचेल कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने उपायको प्रशिक्षणमा समेत छन् । उनलाई पनि पुरस्कार राशिको रकमबारे सूचना आउँदा विश्वास नै भएन ।
उनलाई भने पुरस्कारबाट प्राप्त रकमले दिएको खुसी आर्मीबाट शान्ति सेना गएर प्राप्त भएको जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनी पनि यो रकमको सदुपयोग कसरी गर्ने हो भनेर योजना बुनिरहेका छन् । लकडाउनको कारण धेरै खेलाडीले पुरस्कारबाट प्राप्त रकमले के गर्ने भनेर योजना नै बनाउन पाएका छैनन् । खाली केहीले यो रकमको केही अंक त्यही कोरोना भाइरस संक्रमण पीडितका लागि दिने भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया भने दिएका छन् ।
यस्तो एउटा खुसीको समाचार क्रिकेटबाट पनि आएको थियो, केही दिन अगाडि । त्यसअनुसार क्रिकेट खेलाडी संघ (सीप्यान) ले आयोजना गर्ने भनेको क्रिकेट अवार्डको सबै पुरस्कार रकम कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले खडा गरेको कोषलाई प्रदान गरेको छ । यो रकम ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ छ । विश्वास गरौं, सागका पुरस्कार विजेता खेलाडीले सानै अंश भए पनि आफूले पाएको पुरस्कार रकम कल्याणकारी काममा लगाउने छन् ।